Bloomwell Boka rinowana mari hombe yemari yakambowanikwa mumusika weEuropean cannabis
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Bloomwell Boka rinowana mari hombe yemari yakambowanikwa mumusika weEuropean cannabis
Bloomwell Group rakabudirira kuvhara mbeu yemari kutenderera inodarika madhora gumi emamiriyoni emadhora- inova ndiyo inonyanya kuzivikanwa kudyara mbeu kune kambani yeEuropean cannabis kusvika pari zvino. Anotungamira investor ndiye wekukura capital mupi Measure 10 Venture Partner, nyanzvi mune cannabis indasitiri inodyara. Pakati pevamwe vatengesi, ngirozi yebhizinesi Dr. Reinhard Meier iri kuisa mari zvakare kuburikidza neayo Venture Capital Investors fund; uye Mr. Weber weFPS vakashanda seyemutemo chipangamazano kuna Bloomwell.
Bloomwell Group rakabudirira kuvhara mbeu yemari kutenderera inodarika $ 10 miriyoni emadhora-iyo inonyanya kuzivikanwa pachena mbeu yekudyara kukambani yeEuropean cannabis kusvika pari zvino. Anotungamira investor ndiye wekukura capital mupi Measure 8 Venture Partner, nyanzvi mune cannabis indasitiri inodyara. Pakati pevamwe vatengesi, ngirozi yebhizinesi Dr. Reinhard Meier iri kuisa mari zvakare kuburikidza neayo Venture Capital Investors fund; uye Mr. Weber weFPS vakashanda seyemutemo chipangamazano kuna Bloomwell.
Panguva imwecheteyo nechiziviso, Bloomwell Group, inosanganisira Algea Care, inotungamira telemedicine kambani yekuEurope yekurapa cannabis maererano nenhamba dzevarwere, iri kuzvimisikidza sekambani inobata, ichiitendera kuti ivakire, iise mari kana kuwana makambani e cannabis.
“NaBloomwell, tiri kuvandudza hutano kuburikidza nedigitalization uye kugona kwecannabis yekurapa pamwe nemimwewo mishonga yemuno. Makambani edu eportfolio anotarisa zvakanyanya kune mutengi centric nzira pamwe nechero kukosha kwecheni yekurapa, kunze kwekurima. Nguva yemishonga yakasikwa inotanga izvozvi uye Bloomwell ari kutungamira, "akadaro Niklas Kouparanis, CEO & Co-Muvambi weBloomwell Group.
Mukati megore, Bloomwell Boka rakura kuva vashandi zana nemakumi matanhatu, nemari inofungidzirwa yemamiriyoni mashanu emauroni muna 160. Pamusoro peNiklas Kouparanis, CEO, muzvinabhizimusi uye piyona wecannabis, bhodhi iri rinosimbiswazve nemurapi wezvematerevhizheni Dr. Reinhard Meier, uyo semuvambi akatungamira Teleclinic kubuda, Co-Muvambi Samuel Menghistu naBoris Jordan, wekutanga naye Measure 2021 Venture Partners.
Bhodhi rakakwenenzverwa rinofukidza mafekitori ekurapa, kudigitalization, cannabis, kudyara uye kuvaka chivakwa munzvimbo dzakasiyana dzemusika.
Dr. Reinhard Meier, Director weRadiology kuWestpfalz Klinikum, yakambovambwa nekudyara mumakambani ekurapa akati wandei pamwe nekutanga mari dzinoverengeka dzeVC.
Boris Jordan, Iine $ 285M yekuwana EMMAC, Curaleaf ndiye wekutanga uye chete MSO kuve nehuvepo huvepo muEurope. Joridhani inoonekwa seimwe yenyanzvi dzinozivikanwa dzecannabis muNorth America uye yanga ichitarisira mashandiro eCuraleaf, kambani yepasirese yakatengeswa pachena, pamwe nekudyara mari munzvimbo ye cannabis kuburikidza neMeyasure 8 Ventures.
Niklas Kouparanis, a serial entrepreneur, uye piyona muEuopean yekurapa cannabis indasitiri.
Samuel Menghistu, achitungamira mharadzano yemabhengi, mari, M & A Transaction uye IPOs kweanopfuura makore matanhatu.
"Zvakawanda zvinotarisirwa nevatengesi pamwe nemakambani epasi rese muEuropean cannabis indasitiri hazvina kuzadzikiswa kubva pakagadzwa 'Cannabis Mutemo' munaKurume 2017, kunyangwe musika wakaramba uchikura zvakatsiga. NaBloomwell, isu takaratidza mukati megore rimwe chete kuti yakawanda sei inogona kuwanikwa kuburikidza nemabhizimusi finesse. Iyo indasitiri yeEuropean cannabis indasitiri izere nekwaniso yekukura kweramangwana kwaBloomwell. Kunyange musika uchibatanidza kumwe, zviratidzo zvese zvinonongedzera mukukura nekuwedzera kuburikidza nekubatanidzwa kwecannabis, hunyanzvi, kudigitalisa uye D2C yakakura kana nzira yakanangana nemurwere, "akadaro Anna-Sophia Kouparanis, Co-Muvambi weBloomwell Group.
"Germany ndiyo inotungamira musika weEuropean wecannabis yekurapa uye Bloomwell Group yakaratidza mukati megore rimwe kuti inokwanisa kuona nekukudza mhinduro dzekuvandudza mumusika mutsva uyu wekubatsira varwere. Cannabis ine ramangwana rakajeka muEurope uye tinotarisira kutsigira nekushanda pamwe neBloomwell Group pavanoramba vachiwedzera, "akadaro Boris Jordan, Muvambi Wemubatanidzwa weMeasure 8 Venture Partners uye Executive Chairman weCuraleaf.
"Kugadzira digitalisheni ndiyo kiyi yekupedzisira pakuisa varwere pakati pehurongwa husina kukwana hwekuchengetedza hutano. Algea Care, kambani yemapepfoma yeBloomwell, yatove yakaratidza kuti ine hunyanzvi uye hunyanzvi hwekuvandudza hupenyu uye hupenyu hwezuva nezuva hwezviuru zvevarwere munzvimbo inodzorwa zvakanyanya kuburikidza neyekurapa cannabis uye digitization pamwe neyakawandisa mushando webasa. , ”Akadaro Dr. Reinhard Meier.